Iiworkshop zokuNcitshiswa kweRhafu kunye neeSemina ezifundiswe ngooNgcali
Iinkampani eziNgenisiweyo zifumanise ukuba amalungu asibhozo kwabalishumi awazithathi zonke izaphulelo ezisemthethweni, iikhredithi, okanye ukukhululwa kwabo banelungelo elifanelekileyo kwi-IRS. Ke ngoko, sinikezela ngenkqubo kubathengi bethu apho sisebenzisana khona kunye neengcali zorhafu eziphambili kumthetho wezorhwebo kunye nekhowudi yerhafu ukubanceda ukunciphisa iirhafu zabo ukuya kwelona nqanaba livunyelweyo ngumthetho.
Siza kunikezela ngonxibelelwano lwakho lwerhafu yobuqu, umcebisi ngeshishini, kunye nobuchule beshishini ngenkxaso engenamda kunye nokubonisana. Eli qela liya kuba kunye nawe kungekuphela ngexesha lerhafu, kodwa ngalo lonke ixesha wena ungumthengi nathi.
Uhlalutyo lweminyaka emibini yokugqibela yembuyekezo yerhafu luya kwenziwa kwiiofisi zikaRobert J. Greene, CPA noDennis P. Skea, owayesebenze iminyaka eyi-28 njengearhente ephezulu ye-IRS.
Ngenxa yoko sivunyelwe ngumthetho ukuba sihlengahlengise ukubuyisa kwerhafu kwiminyaka emibini edlulileyo ukuba imeko yakho iyavuma oku kwaye ufumane iidola zerhafu ohlawule ngaphezulu i-IRS. Abaninzi abalungiselela irhafu bafaka nje amanani kwiibhokisi kwiifom zerhafu, kodwa eneneni sikunika izicwangciso ezithile zerhafu zokunciphisa umthwalo wakho werhafu kwaye ugcine imali ezandleni.
Ngokujonga imali yakho kunye neekhowudi zomthetho werhafu sinokuqinisekisa ukuba uhlawula eyona mali iphantsi. Ukuba asikugcinisi i- $ 3,000 kwimbuyekezo yakho akukho ndleko kuwe.
Ngokugcwalisa kwangaphambili kunye nokuhlolwa kwangaphambili kwenkqubo yokuqhutywa kweqela leengcaphephe ze-IRS uyakufumana konke ukuncitshiswa okusemthethweni, ityala kunye nokuxolelwa kwaye wandise abo bacimiweyo ngokusemthethweni ngaphandle kokubangela uphicotho lwembuyekezo yakho.
Ukongeza sinikezela ngeenkonzo zokulungiselela irhafu ye-80% yabathengi esibonelela ngenkonzo.
Siza kuthumela izixhobo zokufunda ezifundwayo ukuze uzisebenzise kunye nenkonzo.
Icandelo lezobuchwephesha lerhafu linika abathengi bethu ukhuseleko lohlolo. Ukuba wazisiwe ngalo naluphi na uhlobo lophicotho-zincwadi siya kukumela ngaphandle kweendleko ezongezelelweyo.
Kwakhona ukuba asikugcinisi i- $ 3,000 kuwe kwiirhafu siya kuyibuyisela umrhumo wethu wenkonzo, kwaye siya kukuqinisekisa oku kwiinyanga ezilishumi elinambini.
Umrhumo wethu ungaphantsi kwesinye kwisithathu iindleko zerhafu eqinisekisiweyo $ 995 kunyaka wokuqala. Ukuba usivumela ukuba senze inkonzo yakho yenkonzo yerhafu sikuqinisekisa ukuba i-5,000 idityanisiwe yokonga kwiirhafu ngeendleko ze- $ 1,495 Uya kufunda ngeendlela zokunciphisa irhafu ezinokuhlala ubomi bakho bonke.
Ukubhalisa kwinkqubo yokuphelisa irhafu, tsalela umnxeba omnye wabacebisi bethu kwi-800-830-1055.